Thursday May 28, 2020 - 15:10:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Faransiiska ayaa lagu sheegay in lajoojiyay adeegsiga kaniiniga Kalooro kuwiin ee bilihii dambe lagula tacaalayay caabuqa halista ah ee Covid19.
Wakaaladda qaranka ee daawada iyo waxsoo saarka caafimaadka dalka faransiiska ayaa go'aamisay in lajoojiyo in kaniiniga "Chloroquine" loo adeegsado latacaalidda Carona Virus, bayaanka kasoo baxay hay'adda oo ay faafisay wakaaladda wararka faransiiska ayaa lagu caddeeyay sababta loo joojiyay daawadan.
Kaniinigan oo asalkiisi hore loogu talagalay in lagula dagaallamo xumadda duumada ama mallaariyada ayaa sedaxdii bilood ee lasoo dhaafay loo adeegsanayay in lagu khafiifiyo xanuunka safmarka ah ee Carona Virus.
Hay'adda daawada faransiiska waxay ku andacootay in kaniiniga mallaariyada uu sababay xanuuno sababay dhimasho sida wadna xanuun daran, muwaadiniinta faransiiska ah ayaa looga digay isticmaalka kaniiiga kalooro kuwiinka.
Faransiiska waa wadanka afaraad ee qaaradda Yurub ee dadkiisu ladhibanyihiin caabuqa Carona Virus waxaana ka horreeya wadamada ingiriiska,talyaaniga iyo Spain.